Sweden: “Waa in aan shaqaalaysiinnaa ciidamada booliiska Norway” | Hangool News
May 18, 2019 - Written by Hangool News 1
Midowga booliiska Sweden ayaa xukuumadda dalkaas ugu baaqay in ay shaqaalaysiiso ciidamo booliis ah oo u dhashay dalka ay dariska yihiin ee Norway si loola daggaalamo saraakiil la’aanta haysata dalkaas.
Mas’uuliyiinta booliiska Sweden ayaa BBC-da u sheegay in aanay hayn qorshe ku aaddan in ay shaqo siiyaan saraakiil dibadaha lagusoo tababaray.
“Sanado badan ayay qaadanaysaa in tirada booliiska kor loo soo qaado oo aan gaarsiinno halka aan rabno” ayay tidhi Dennis oo BBC-da la hadashay.
Waxa ay sheegtay in Midowga ay madaxda ka tahay uu soo jeediyey in ay ciidamo ka shaqaalaysiiyaan dalka Jaarka la ah ee Norway waayo bay tidhi ” Waxaan doonayna in dhibaatada nahaysata aa xallino halkii aan cid walba u sheegi laahyn sida xaalku noogu xun yahay”.
Mas’uuliyiinta booliiska Sweden ayaa BBc-da u sheegay ” In ay wanaagsan tahay in lasoo jeediyo fikrad caynkaas ah oo cusub”